Thwebula AdwCleaner 8.0.9.1 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: AdwCleaner
AdwCleaner – ithuluzi ukususa adware eyingozi. AdwCleaner ngempumelelo ususa anezele ukukhangisa, wamathuluzi isiphequluli kanye nezinsizakalo ezihlukene noma isofthiwe, efakwe ngokuzimela. Isofthiwe aqalaze computer yakho ukuze amamojuli engadingeki noma anezele futhi ubonisa imiphumela scan in kwamathebhu efanele. AdwCleaner kwenza ukuba akhethe isofthiwe ezisolisayo ngokuzimela futhi emva ekuhlungeni ukubuka umbiko okuningiliziwe ifayela umbhalo. Futhi isofthiwe uyakwazi ukuthola nokususa abaduni isiphequluli shintsha lamanje ikhasi lasekhaya noma search engine isiphequluli ngaphandle kwemvume yomsebenzisi. AdwCleaner ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ukususwa malware imiphumela yomsebenzi walo
Ukuhlanza ebhukwini kanye uhlelo nezinsizakalo
Ukususwa emakhasini ngendlovu yangena futhi izinjini
Amazwana ku AdwCleaner
AdwCleaner software ehlobene
Lesi yisisombululo esiphelele se-antivirus sokuvikeleka okukhulu, esakhiwe yinkampani eyaziwa emkhakheni wokuphepha kolwazi.
Lo mbuso ubonisa zonke izinhlelo zokusebenza nezinsizakalo ezixhunywe kwinethiwekhi yi-protocol ye-TCP. Isofthiwe ingabulala izinqubo futhi iqede ukuxhumana.
Ithuluzi Elula ukuxhumana ngokusekelwa kwemisebenzi ethandwayo. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze izingcingo ngezwi, umbhalo exchange imiyalezo namafayela.
Lesi isithunywa sebhizinisi esinokusebenza okuphambili ukuxhumana engxoxweni yeqembu nokusekelwa kwezingxoxo zezwi noma ividiyo.